Trump oo banaanka soo dhigay fikradda xun ee uu ka qabo dalal ay Soomaaliya ka mid tahay | Xaysimo
Home War Trump oo banaanka soo dhigay fikradda xun ee uu ka qabo dalal...
Trump oo banaanka soo dhigay fikradda xun ee uu ka qabo dalal ay Soomaaliya ka mid tahay
Inkasta oo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Maraykanka uu yahay mid diiran, islamarkaasna uu sii kordhayo iskaashiga labada dal, ayaa haddane waxaa markii ugu horeysay soo baxaya fikradaha uu madaxweynaha Maraykanka ka qabo Soomaaliya.
Inkasta oo uusan toos u magacaabin, haddane Donald Trump ayaa laga soo xigtay hadalo ay warbaahinta adduunka aad u faafisay oo uu ka sheegay afar xildhibaan oo ku jira Aqalka Congress-ka Maraykanka, oo ay ka mid tahay Ilhaan Cumar, oo asal ahaan ka timid Soomaaliya.
Wuxuu yiri “Waa arrin xiiso leh in aan aragno xildhibaanada dumarka ah ee xisbiga dimoqoraadiga, kuwaas oo asal ahaan ka yimid dalal dowladahooda ay gebi ahaanba yihiin kuwa masiibo ah, oo musuqmaasuq hareeyay, ahna kuwa ugu xun ee adduunka ka shaqeeya, in hadda dadka reer Ameerika oo ah kuwa ugu awoodda badan adduunka ay u sheegeen sida wax loo maamulo”.
So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……162K3:27 PM – Jul 14, 2019Twitter Ads info and privacy81.4K people are talking about this
Wuxuu Trump intaas ku daray in marka hore ay soo hagaajiyaan dalalkii ay ka yimaadeen.
Balse afarta dumar ee la sheegay in uu hadalka ula jeedo, saddex ka mid ah waxa ay ku dhasheen Maraykanka, marka laga reebo Ilhaan Cumar oo iyada oo yar Soomaaliya ka tagtay.
Ilhaan oo u jawaabtay Trump ayaa sheegtay in ay u dhaaratay qaranka Maraykanka iyo sidii ay uga difaaci lahayd wax ay ku tilmaamtay ‘madaxweynihii ugu musuqmaasuqa badnaa ee soo maray”.
Madaxweyne Trump ayaa sannadkii hore dalalka Afrika iyo kale ku tilmaamay kuwa ‘Gudaafad ah’, hadalkaas oo ay ka dhalatay caro badan.
Sidoo kale Soomaaliya waxa ay ahayd dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee maamulka Trump uu kusoo rogey mamnuucista xagga safarka, isaga oo lagu eedeeyay in ay fadhiisimo u yihiin kooxo argagixiso ah.
Dowladda Soomaaliya ayaanan ka jawaabin hadalka cusub ee loo tiiriyay madaxweynaha Maraykanka.
Balse wasiir ka tirsan jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhowaaqday ee Somaliland ayaa bartiisa Twitter-ka ugu jawaabay Trump, wuxuuna sheegay in uu ku raacsanyahay Trump aragtidiisa ah in dowladda Soomaaliya ka jirta ay tahay mid musuqmaasuq ah.
Maxamed Daahir Axmed ayaa ah wasiir ku xigeenka waxbarashada Somaliland.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @MinModahir
Mohammed Dahir Ahmed@MinModahir
In Somaliland we agree with President @realDonaldTrump there isn’t a functioning Government in Mogadishu ie Somalia but there is mafia group which promote instability in East Africa’s @FranceinSomalia @US2SOMALIA @AsstSecStateAF @SecPompeo https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1150381394234941448 …Donald J. Trump✔@realDonaldTrumpSo interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……429:10 PM – Jul 14, 2019Twitter Ads info and privacy45 people are talking about this
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @MinModahir